Sida loo soo helo Fake Torrent File Downloads
Internet & Shabakad Aasaaska
Ha ka helin nacas si aad u faafiso fayraska & feylasha codsadaha
Shakhsiyaadka iyo dadka aan waxba galabsan ee P2P waxay isticmaalaan jaahwareer been ah si ay u qoondeeyaan aqoonsiga dadka, iyaga oo khiyaameeya lacagtooda, ama kufeegaan kombiyuutarkooda iyada oo loo marayo infekshanada khatarta ah.
Nasiib wanaag, uma baahnid inaad ka mid noqoto dadkaas. Waxaa jira calaamado muujinaya in feylka torrentka ee aad fiirineyso uu yahay been abuur, ama waa in si qoto dheer loo wajahaa si taxadar leh.
Hoos waxaa ku qoran 10 talooyin oo kaa caawinaya inaad ku aragtid filim fiidiyow ama been abuur ah. U hubso inaad sidoo kale hubiso liistada aan joogtada ah ee cusbooneysiinta ee boggeeda sare ee shabakadaha !
01 ee 10
Iska Dajinta Suuqyada laakiin Laga Yaabo ama Qodobo Yar
Dareemayaasha xadgudubka badanaa waxay khiyaameeyaan tirade miraha iyo kuwa la midka ah. Isticmaalidda qalabyada software sida BTSeedInflator , kuwa xadgudubka sameeya ayaa ka dhigi doona talaalladoodu inay u eg yihiin 10,000 ama ka badan kuwa isticmaala ayaa wadaagaya.
Haddii aad aragto noocyadan tiro tiro badan / midba mid ah, laakiin ma jiraan wax faallooyin ah oo ku saabsan feylka, waxaad noqon lahayd inaad iska ilaaliso faylka!
Wareeg kasta oo dhab ah oo leh in ka badan dhowr kun oo miraha waa in sidoo kale la helaa faallooyin user ah. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad fiirinayso qandaraas / been abuur.
Hubi 'Xaqiijinta' Xaaladda Torrent
Qaar ka mid ah boggaga torrent ayaa dhab ahaantii u shaqeeya guddi isticmaaleyaasha muhiimka ah si ay u xaqiijiyaan iyo 'xaqiijiyaan' torrents.
Inkasta oo faylasha la xaqiijiyay ay yihiin kuwo yaryar, waxay aad u yartahay inay noqdaan kuwo sax ah oo lagu kalsoonaan karo. Nadiifi kumbuyuutarkaaga muusiggaaga cusub ee la cusbooneysiiyo oo firfircoon, iyo 'xaqiijiyo' faylasha waa inay noqdaan kuwo badbaado leh.
Xaqiiji Taariikhda Shaacinta Siidaynta Qaybta Saddexaad
Wixii calaamad cusub ee filimka cusub, qaado daqiiqo si aad u booqato IMDB oo hubi taariikhda sii deynta.
Haddii biyaha la sii daayay kahor taariikhda filimka dhabta ah, ka dibna ha aaminin.
Sure, waxaa suurtagal ah in ay noqon karto wax dhab ah, laakiin wax badan oo badanaa ma ahan, sidaa darteed iska ilaali.
Waxaad sida badan ku aaminsan kartaa AVI iyo MKV Files (laakiin iska ilaali WMA iyo WMV)
Inta badan, faylasha filimada runta ah waxay ku jiraan qaabka AVI ama MKV .
Taa bedelkeed, inta badan ee WMA iyo WMV faylasha waa been abuur. Inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah tusaalayaal asal ah, faylasha ku dhamaatay .wma iyo fiilooyinka kale ee joogtada ah waxay isku xirnaan doonaan goobo kale si ay u helaan codsiyada lacag-bixinta ama xatooyo qalad ah.
Si ka fiican sidii aad uga fogaan lahayd noocyada faylasha oo dhan gebi ahaanba.
05 ee 10
Si taxadar leh ula soco Files RAR, TAR, & ACE
Haa, waxaa jira kuwa feyreeya oo sharci ah oo isticmaala dukumiintiyada RAR si ay u wadaagaan faylasha, laakiin filimaanta iyo muusikada, inta badan RAR iyo noocyada kale ee faylasha faylasha waa been abuur.
Isticmaalayaasha Torrent waxay isticmaalaan habka RAR si ay u qariyaan feejignaanta qaabka Trojan iyo faylasha codsatada codka. Fiidiyowga aad ka soo degtay ayaa horay loo xayuubiyay, markaa uma baahnid inaad ku cadaadiso mid ka mid ah noocyadaas.
Haddii aad aragto fayl muuqaal ah oo muuqaal ah oo ku yaala RAR, TAR , ama ACE, aad uga taxaddar oo u fiirso wixii fayl ah ee ku qoran liiska ka hor intaanad soo dejisan.
Haddii aysan jirin liis ku saabsan waxyaabaha ku jira, ha aamina. Haddii liiska feylka la soo bandhigo, laakiin waxaa ku jira EXE ama tilmaamo kale oo ku salaysan qoraalka (ka badan kuwa kuwa hoose), ka dibna u gudub.
Had iyo jeer Akhri Faallooyinka
Qaar ka mid ah boggaga jilicsan sida waxay ku soo rogi doonaan faallooyinka ku saabsan faylasha shakhsiga Sida eBay jawaab celinta dadka isticmaala eBay kale, faallooyinkani waxay ku siin karaan dareen ah sida sharcigu u shaqeeyo.
Haddii aad aragto wax faallo ah oo ku saabsan faylka, ha noqotee shaki. Haddii aad aragto faallooyin faquuq ah oo ku saabsan feylka, ka dibna u dhaqaaq oo raadso torrent.
Iska ilaali haddii Tilmaamayaasha Furaha, Tilmaamaha Gaarka ah, ama Diiwaanada EXE ay ku jiraan
Haddii aad aragto faylka filimka / muusigga muusiga oo leh 'password', 'tilmaamo gaar ah', 'tilmaame codsiyada', 'tilmaamaha codka', 'muhiim u akhri marka hore', 'fariimaha soo socda halkan', ka dibna khatarta ah waa khayaano ama been abuur.
Abaalmarinta halkan waxaa laga yaabaa in ay raadineyso in laguu soo celiyo bogga shady si loo soo dajiyo ciyaaryahan filim ah oo cajiib ah shardi ah inuu furo faylka filinka.
Intaa waxaa dheer, haddii uu jiro EXE ama fayl kale oo la fulin karo , ka dibna hubaashii ka fogow download torrent. Faylasha la hirgaliyo ee filimada iyo muusikada waa inay noqdaan calan weyn oo casaan ah!
Faylka EXE iyo password kasta ama tilmaamaha gaarka ah ee taleefanka waxay u badan tahay inay calaamad u tahay inaad ka heshid torrent download wanaagsan meel kale.
Ka fogow Isticmaalka Barnaamijyada soo socda
Qaar ka mid ah macaamiisha software-ka ee kombuyuutarrada ayaa ku kasbaday sumcad xun ee abuurista nacnaca, farsamoyaqaannada khiyaameeya khayaanada, keyloggers iyo Trojans.
Akhristeyaasheena waxay si joogta ah noogu taliyeen in ay ka digaan isticmaalka BitLord, BitThief, Get-Torrent, TorrentQ, Torrent101, iyo Bitroll.
Noo sheeg haddii aad diidan tahay ama aad cid kale u leedahay liiska liiska!
09 ka mid ah 10
Dareemayaasha Dareemayaasha ah oo aan laga heli Karin Google
Furto faahfaahinta tifaftirka ee la daabacay, iyo nuqul dhejinta magacyada tracker Google. Haddii tracker yahay sharci ah, waxaad arki doontaa tiro hits Google ah halkaas oo goobo badan oo torrent oo tilmaamaya tracker soo dhejiyay.
Haddii tracker uu yahay mid been ah, waxaad ka heli doontaa hits badan oo aan xiriir la lahayn Google, inta badan ereyada 'been abuur' sida dadka isticmaala P2P digniinta digniinta ee ku saabsan tracker fake.
Kaliya isticmaal Isticmaalayaasha Warbaahinta
Kuwani waa filin badan oo aamin ah iyo ciyaartoyda muusikada ee Windows, Mac, Linux, iyo casrigaaga.
Qaar ka mid ah WinAmp, Windows Media Player (WMP), VLC Media Player, GMPLayer, iyo KMPlayer ... iyo kuwa kale, dabcan.
Samee raadinta degdegga Google ee ciyaaryahan kasta oo warbaahinta aadan aqoon. Iyada oo xulashooyin badan oo lagu kalsoonaan karo, ha u gelin halista soo dejinta iyo rakibida wax aanad waligeed maqlin. Waxay noqon kartaa in la joojiyo wax aan waxba ahayn laakiin nacfi!
Waa maxay sababta IPv6 muhiim u ah dadka isticmaala internetka?
Baro Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Gawaarida iyo Sida ay Shaqeeyaan
Dhibaatooyinka Shabakada Guriga ee La wadaago
Sida loola macaamilo kombiyuutar ama bogga internetka
VPN's: IPSec iyo SSL
Waa maxay sida saxda ah 'Telnet'? Waa maxay Telnet?
Qalabka Hirgelinta Qalabka Hirgelinta
192.168.1.0 Nidaamka Shirkadda gaarka ah ee IP-ga
9 Best Torrent Downloader Tools Tools
Maxay yihiin Widgets Webka?
4 Barnaamijyada Imtixaanka Habboon ee Bilaashka ah
10ka Wii Cayaarista Wii ee Dhammaan Wakhtiga
Sidee loo Bixiyaa .Doc ama .Txt Faylasha Bogagga Shabakadaha
3 Talaabooyin lagu fiirsanayo daabacaadda 3D iyo Copyright
Mashruuca DLP ee Mashruuca
Maxay Foomka VSD?
Sida Loo Bixiyo Tigidhada Tigidhka leh Google
Yaa Tim Berners-Lee?
Qayb ka mid ah Dareewid la Xiriirta Utility-ka Windows OS El Capitan
Sida loo Isticmaalo Rugaha Wareega ee Adobe Animate CC
Noocyada Hore ee PowerPoint 2010 iyo Graphics
Isku bedelista faylka XML si uu u noqdo qaab wanaagsan
Wareegtada iwm. Cameras: Labada Qaado Video, Yaad u Baahan Tahay?
Disable 'Faylasha Ammaanka Furan Ka Dib Soo Qabashada' Habka Safari
Wax ka Baro Metadata Podcast iyo ID3 Tags
Miyaan u baahanahay iPod si aan u ciyaaro heesaha iTunes, mise waxaan isticmaali karaa wax MP3 player ah?
Sida Loo Beddelo Beddelka DNS Server
Kordhin Download Speed ​​ee Macmiilka BitTorrent